'casa mia' Entywiliselwe kwindalo enembono yolwandle - I-Airbnb
'casa mia' Entywiliselwe kwindalo enembono yolwandle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJocelyne
Ifulethi elizimeleyo le studio (20sqm + mezzanine) ene-pergola ephilayo ejonge kwiGolfo Paradiso. Kwiinduli, zijikelezwe buhlaza kubathandi bokuzola. Ikhitshi elixhotyiswe, igumbi lokuhlambela, ibhedi yesofa ephindwe kabini + iibhedi ezi-2 kwi-mezzanine, ezifanelekileyo kwiintsapho ezinabantwana. Ayifanelekanga kubantu abakhubazekileyo okanye izifo zamadolo.
[CITR ikhowudi: 010047-AFF-0001]
Ngaphambi kwestudiyo, i-pergola enkulu apho ungatya khona, ufunde incwadi emthunzini okanye ujonge nje ukutshona kwelanga kuthe cwaka ...
Sibekwe ecaleni kwendlela ye "Liguria" (iVentimiglia - Luni) Unokuphinda uhambe ngeendlela ezininzi kwi-Meditera scrub ecaleni kwenethiwekhi yeendlela eziqala ngokuthe ngqo ukusuka kwindlu yethu kwaye ufikelele kwiicawa zamandulo, iindawo zokuhambela kunye nemikhosi yendawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Jocelyne
Siya kukuvuyela ukunazisa kwizinto ezikhethekileyo kwintsimi yethu.
Inombolo yomthetho: 010047-AFF-0001
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Recco